साताको पहिलो दिन ११७५.७२ विन्दुमा नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर साताको पहिलो दिन ११७५.७२ विन्दुमा नेप्से
on: १० भाद्र २०७५, आईतवार १६:१९ मुख्य खबर, लगानी
साताको पहिलो दिन ११७५.७२ विन्दुमा नेप्से
भदौ १०, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २४ प्रतिशतले घटेको छ । केही दिनयता लगातार ओरालो लागेको परिसूचक यस दिनपनि घटेको छ । पछिल्लो ६ दिनमा नेप्से परिसूचक ३४ दशमलव ६ अङ्कले घटेर आइतवार १ हजार १ सय ७५ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेर टुङ्गिएको छ ।
त्यस्तै, ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले घटेर २ सय ४८ दशमलव ४२ अङ्क पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम २५ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर रू. २० करोड ५५ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बजार पूँजीकरण रू. ३ अर्ब घटेर रू. १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । यस दिन रू. ३९ लाख ८१ हजार बराबरको म्यानुअल कारबोर भएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से परिसूचक घटेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयरको रू. ५ करोड ३२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस संस्थापक शेयरको ७ पटकको व्यापारमा ९४ हजार ७ सय ४३ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस शेयरको शेयर मूल्य स्थिर रहेर अन्तिम मूल्य रू. ९ सय १५ मा सीमित रहेको छ । साथै, प्रभु बैङ्कको संस्थापक शेयरको रू. १ करोड २७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । ङादी ग्रुप पावरको शेयरको मूल्य ४ दशमलव १९ प्रतिशतले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ सय ७४ पुगेको छ । त्यस्तै, कर्णाली डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य ५ दशमलव ६६ प्रतिशत घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ सयमा सीमित रहेको छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ । लघुवित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत, विकास बैङ्कको शून्य दशमलव ८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत घटेको छ । साथै, ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव २६ प्रतिशत, जलविद्युतको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत, बैङ्किङको शून्य दशमलव १ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र होटलको न्यून अङ्कले घटेको हो ।
यस दिन ३६ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ८२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने २८ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ४६ कम्पनीको २ हजार ५ सय ७५ पटकको व्यापारमा ६ लाख ९ हजार २ सय ५७ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४० दशमलव ९२ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो शून्य दशमलव ४३ अङ्क रहेको छ । यसले बजार वियरिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
नेप्सेमा करेक्शन, १२८० विन्दुमा पुग्दा लगानीकर्ता नाफा बुकतर्फ
९ बैशाख २०७६, सोमबार १५:२८
जीवन बीमाको परिसूचक ३.३५ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से ३.१६ अंकले बढ्यो (२ बजेको अपडेट)
९ बैशाख २०७६, सोमबार १४:०८
१२८० सम्म पुगेको परिसूचक दोस्रो घण्टामा १२७०.७४ विन्दुमा (१ बजेको अपडेट)
९ बैशाख २०७६, सोमबार १३:१२
सोमवार एक घण्टामा १४ अंकले नेप्से बढ्दा २० करोडको कारोबार (१२ बजेको अपडेट)
९ बैशाख २०७६, सोमबार १२:०९